China General Aluminium ravin vita amin'ny alimina sy mpanamboatra | Yongjie
Tempera: O / H18 / H14 / H24 / H16 / H26 / H32 / H34
1000 andiany. Amin'ny andiany rehetra, ny andiany 1000 dia an'ny andiany misy atiny aliminioma bebe kokoa. Ny fahadiovana dia mety hahatratra mihoatra ny 99,00%. Satria tsy misy singa ara-teknika hafa dia tsotra ny fizotry ny famokarana ary mora ihany ny vidiny. Andiany iray ampiasaina matetika amin'ny indostrian'ny mahazatra. Amin'izao fotoana izao, ny ankamaroan'ny andiany 1050 sy 1060 dia mivezivezy eny an-tsena. Ny atin'ny alimina amin'ny takelaka 1000 vita amin'ny alimina dia voafaritra arak'ireo tarehimarika arabo roa farany. Ohatra, ny tarehimarika arabo roa farany an'ny andiany 1050 dia 50. Araka ny fitsipiky ny anarana amin'ny marika rehetra, ny atiny aliminioma dia tokony hahatratra 99,5% na mihoatra mba ho vokatra mahay.
Ny solontenan'ny firaka aliminioma 3000 series: 3003 3004 3005 3104 3105. Ny dingana famokarana takelaka vita amin'ny alimo 3000 dia somary matotra. Tora-by aluminium miisa 3000 no vita amin'ny manganese ho singa lehibe. Ny atiny dia eo anelanelan'ny 1.0-1.5, izay andiany misy fiasana manohitra harafesina tsara kokoa.
5000 firaka vita amin'ny aliminioma dia maneho 5052, 5005, 5083, 7574, sns. Ny tsoraka alimina 5000 dia an'ny andiana takelaka firaka vita amin'ny alimika matetika, ny singa lehibe dia ny maneziôma, ary ny atin'ny magnesoma dia eo anelanelan'ny 3-5%. Izy io koa dia azo antsoina hoe firaka aliminioma-magnesium. Ny tena mampiavaka azy dia ny hakitroky ambany, ny tanjaka avo, ny fanitarana avo, ary ny tanjaka havizanana tsara, saingy tsy azo hamafisina amin'ny fitsaboana hafanana. Ao amin'io faritra io ihany, ny lanjan'ny firaka aliminioma-magnesium dia ambany noho ny andiany hafa, ary ampiasaina betsaka amin'ny indostrialy mahazatra ihany koa. Ny takelaka vita amin'ny aliminioma 5000 dia iray amin'ireo andiana ravina aliminioma matotra kokoa.
Solontena firaka vita amin'ny alimina 6000 (6061 6063)
Izy io dia misy singa roa an'ny magnesium sy silicon, noho izany dia mampifantoka ny tombony amin'ny andiany 4000 ary ny andiany 5000 6061 dia vokatra sandoka vita amin'ny alimina mangatsiaka, mety amin'ny fampiharana misy fepetra takiana amin'ny fanoherana ny harafesina sy ny fitrandrahana oksidasi. Fahaiza-miasa tsara, mora fonosana, fahaiza-manao tsara.
Previous: Takelaka matevina
Tendrombohitra Aluminium Foil
Takela-by vita amin'ny aliminioma volamena
Takelaka vita amin'ny aliminioma matevina